PressReader - Isolezwe: 2018-06-14 - Unqotshiswe ukuvithizwa yizivuvaba zempilo
Unqotshiswe ukuvithizwa yizivuvaba zempilo
Isolezwe - 2018-06-14 - EZOMNOTHO - BONISWA MOHALE
UGQUGQUZELE intsha ukuthi ishintshe indlela ebuka ngayo impilo usomabhizinisi omncane waseThekwini, uMnuz Mfundo Shozi (27), owaqala inkampani yezokuxhumana enoR1 135.
UShozi ungumnikazi wenkampani Uvolwethu Communications, uthe washintsha ubuhlungu ayenabo emuva kokunqunywa umlenze wabenza ukuthi bukhuthaze abalahlekelwe yithemba, wabhala incwadi waphinde wavula nenkampani.
UShozi uveze ukuthi ngesikhathi ekhula wayenephupho lokuba ngumdlali webhola kodwa iphupho lakhe lashabalala ngesikhathi enqunywa umlenze.
“Ngikhuliswe ngumama emuva kokushona kukababa ngineminyaka engu- 8. Umama washona ngineminyaka engu12, ngakhuliswa wugogo oshone ngineminyaka engu-16. Ngibe senginakekelwa ngumalume owadutshulwa odlameni lwamatekisi ngineminyaka engu18. Kuthe ngineminyaka engu-19 ngashayiswa wubabekazi wami ngemoto ngephutha ekhaya, ngagcina senginqunywe umlenze,” kusho uShozi.
Uthe wachitha ngaphezu kwezinyanga ezimbili esibhedlela kodwa akazange aphele amandla njengoba wathi uma ephuma khona waqhubeka nezifundo zakhe zePublic Relations, wathola iziqu zakhe eDurban University of Technology.
“Ngesikhathi ngilele esibhedlela ngathola ithuba lokucabanga kahle ngempilo yami ngigqugquzelwa ngamazwi ombhali, uWayne Dyer, athi ‘Uma ushintsha indlela obuka ngayo izinto, ziyashintsha. Ngakho kukuwe ukuthi izingqinamba obhekene nazo nobuhlungu obuzwayo ubushintshe ubenze ithuba’. Obami ubuhlungu bangisiza ngavula ibhizinisi, ngabhala incwadi ngaphinde ngakwazi ukuthula izinkulumo ezakhayo ezibuyisa ithemba kubantu,” kusho uShozi.
Uthe inkampani yakhe wayisungula eneminyaka engu-20 kanti izingqinamba abhekana nazo wukuthola umsebenzi namathuba njengoba ethi osomabhizinisi abancane abanikezwa amathuba okuveza amakhono abo.
“Akusiwona wonke umuntu ongakwazi ukuba ngusomabhizinisi ngoba kudingeka usebenze ngokuzikhandla, ukwazi nokudela izinto ozithandayo. Kuthatha isikhathi futhi ababaningi abantu abaxhasa imibono yosomabhizinisi,” kusho uShozi.
Uthe usizwe wukuba nomuntu omqeqeshayo, uMnuz Scelo Mzimela, nokungena ohlelweni olusiza osomabhizinisi abancane lweBlack Umbrellas.
“Ngesikhathi mina nomuntu engisebenzisana naye ebhizinisini, uNksz Neliswa Makhaza, singena kwiBlack Umbrellas sasizitshela ukuthi siyakwazi esikwenzayo kodwa sathola ukuthi kuningi okufanele sikufunde. Ukuba kwiBlack Umbrellas kuyasisiza ngoba Uvolwethu Communications luthola ukuqeqeshwa ngomakadebona kwezebhizinisi. Ngiphinde ngaba nenhlanhla yokuqeqeshwa nguJT Foxx esiza abantu ukuba bakhe umcebo emhlabeni jikelele. Ngigqugquzela bonke osomabhizinisi abancane ukuthi bangene ngaphansi kwezinhlelo ezisisiza osomabhizinisi njengeBlack Umbrellas.”
Isithombe: FACEBOOK KAMFUNDO
UMNUZ Mfundo Shozi uthi osomabhizinisi abancane abanikwa amathuba okudayisa imikhiqizo nezinsiza zabo yize uhulumeni ebagqugquzela ukuthi basungule amabhizinisi